Clearplay अनलाइन मा जानकारी को लिङ्क कैसीनो पुरस्कार प्रणाली:
• Clearplay को इतिहास
o तालिका - परम्परागत खेल प्रतिशत
o तालिका - क्यासिनो समूह खेल प्रतिशत पुरस्कार दिन्छ
o तालिका - साइन-अप इनाम नियम सारांश
• के शुरुवात हटाउन अनुमति छ भने के गर्न
• के गर्नु पर्छ यदि प्रारम्भिक निकाय छैन Permitted
o तालिका - पारंपरिक खेल प्रतिशतको साथ Wagering को समयमा पुरस्कार पुरस्कृत
o तालिका - Wageringwith क्यासिनो RewardsPercentages समयमा पुरस्कार पुरस्कार
जब यो अनलाइन क्यासिनोमा आउँछ, तिनीहरूमध्ये अधिकांशले सफ्टप्ले भनिने बोनस प्रणाली (फ्लेक्सी बोनस प्रणाली वा ईजे) भनिन्छ। यो प्रणालीले के गर्छ? यसले तपाईंको खाता दुई फरक मा विभाजन गर्दछ - एक इनाम ब्यालेन्स र एक व्यक्तिगत नगद ब्यालेन्स। जब तपाईं इन्टरनेट कैसीनोमा जुवा गर्नुहुन्छ, इनाम वा बोनस बैङ्कले 10 क्रेडिट रकममा नगद ब्यालेन्समा परिवर्तन गरेको छ। तथापि कुनै निषिद्ध खेलहरू छैनन्, तिनीहरू विभिन्न प्रतिशतमा मापन हुनेछन्। जब यो उच्च गृह फायदा गेमहरू जस्तै स्लॉट्स जस्ता हुन्छन्, उनीहरूले 100% दाँतमा गणना गर्छन्। एकै समयमा, भिडियो गेम वा भिडियो पोकर जस्तै कम गृह किनारा खेलहरू ब्लेक एकदम सानो योगदानको लागि अनुमति दिनेछ। Clearplaybonus कार्यक्रम को एक मानक सेटअप भित्र, तपाईं आफ्नो जुर्माना ब्यालेन्स साथै कुनै पनि क्षणमा भुक्तानी भुक्तानीहरू बाहिर लैजान सक्नुहुन्छ, चाहे तपाईले जुआ समाप्त गर्नु भएको हो वा होइन। तथापि, प्रायः क्यासिइनहरूसँग प्लेब्रु आवश्यकताको साथ लागू गरिएको इनामको परिमार्जित रूप छ, जसको मतलब तपाईंले पूरा शर्त पूरा गर्न पछि मात्र आफ्नो विन्निङ लिन सक्नुहुनेछ। बगैंचा
अनलाइन क्यासिनोहरूमा खेलाडीहरूले प्राय: प्रस्ताव गरिएको बोनसलाई बेवास्ता गर्दछन्, किनकि उनीहरूले बुझ्छन् कि उनीहरूले प्लेथ्रु आवश्यकता पूरा गर्न असम्भव छ। यसैले 2006 मा धेरै अनलाइन क्यासिनोहरू क्लियरप्ले इनाम प्रणाली विकास गर्न एकजुट भएका छन् जुन यो मुद्दालाई समाधान गर्न डिजाइन गरिएको थियो। यस प्रणाली अन्तर्गत, खेलाडीहरूले कुनै पनि समयमा आफ्नो जितेको राशि लिन सक्दछ, शून्य प्रतिशत बोनस जुन उनीहरूले प्रयोग गरेनन्। यस तरिकाले खेलाडीहरू कहिले पनि हानिकारक स्थितिमा छोडिदैनन्। यो आश्चर्यजनक होइन कि प्रणाली दुबै बीच लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ Microgaming कैसीनो र खेलाडीहरू। क्यासिनो बोनस 2
क्यासिनोको ठूलो संख्याले ठूलो साइन-अप प्रदान गर्दछ र पुन: लोड पुरस्कार - उदाहरणका लागि, 400% पुरस्कार reward / € / £ 200 जति। यो लामो समय थिएन जब गेमरहरूले पत्ता लगाए कि तिनीहरूले यी पुरस्कारहरूको उपयोग गरेर उनीहरूको सम्पूर्ण खाता ब्यालेन्स (जुन एबोनस वा नगद सन्तुलन हुन सक्छ) एकल शर्त प्रयोग गरेर र पछि फिर्ताको लागि वा फिर्ताकोप लगाई माइक्रोमिaming्गोउटोप्लेको प्रयोगमा विशाल लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस प्रकारको टेक्निक निरन्तर रूपमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको थियो। स्थितिलाई सामना गर्न, क्यासिनोहरूको समूहले यसमा कार्य गर्ने निर्णय गर्यो। उदाहरण को लागी, मार्च 2007 मा, फॉर्च्यून लाउञ्ज समूह दर्जनौं सयौं खेलाडीहरुलाई आफ्नो क्यासिनोबाट निषेध गर्न अघि बढ्यो। अन्तमा, बोनस नियमहरू सुरुमा क्लियरप्ले बोनस पेश गरेको सबै क्यासिनोमा परिमार्जनहरू भए। grandbay क्यासिनो
यो खेलाडीहरूले उनीहरूको जित जित्न अघि उनीहरूले खेलकुदको आवश्यकता पूरा गर्न साइन-अप इनाम प्रयोग गरेर बल दिन व्यापक रूपमा लोकप्रिय भए। बिभिन्न उपायहरूमा केहि खेलहरूको प्रतिशत कम गर्नु समावेश छ, जस्तै फ्रेन्च रुले। केही क्यासिनोहरूले खेलाडीहरूलाई साइन अप इनाम प्रयोग गर्नका लागि मात्र उनीहरूको सम्पूर्ण क्यासिनो समूह भित्र एक पटक अनुमति दिए। अरूले आफूलाई प्रतिशतमा 100% भन्दा बढि केहि प्रस्ताव गर्न रोके। धन्यबाद, त्यहाँ अझै धेरै क्यासिनोहरू बाँकी छन् जसले अझै बोनस नियमहरूमा कुनै परिमार्जन ल्याएको छैन र अझै पनी पुरस्कार प्रदान गर्दछ। भव्य बे क्यासिनो
प्रत्येक कैसीनो समूहसँग खेल प्रतिशतहरू सेट गर्नका लागि आफ्नै नियमहरू छन्। यदि तपाइँ तलको तालिकामा हेर्नुभयो भने, तपाइँ प्रत्येक खेलको लागि वजनहरू देख्न सकिन्छ जुन पारदर्शी रूपमा Clearplay इनाम प्रणाली अन्तर्गत प्रयोग गरिन्छ जसमा 30xplay को आवश्यकता हुन सक्छ। केवल स्लट्स प्ले गर्न छनौट गरेर, तपाईंले आफ्नो winnings हटाउन सक्नुभन्दा पहिले 30 पटक इनाम प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यदि तपाइँ केवल तालिका पोकर खेलहरू खेल्नुहुन्छ भने, आवश्यकता 60 पटक हुनेछ - र तपाइँ यसलाई पूरा भएपछि एक पटक नगद आउट हुनेछ। भिडियो पोकर प्ले गर्नेहरूका लागि, भ्यागुङ आवश्यकता 300 मा छ, यसको अर्थ यो 300 पटक तपाइँले बोनस गरे पछि बोनस नगद योग्य हुन्छ।
स्लट्स, अमेरिकी रूले र पार्लर खेलहरू 100%
टेबल पोकर खेलहरु, कैसीनो युद्ध, अमेरिकी Roulette को छोडेर Sicbo र सबै Roulettes 50%
भिडियो पोकर, क्रेप्स, Baccarat र सबै Blackjacks क्लासिक ब्ल्याकजैक छोडेर 10%
क्लासिक ब्ल्याक ज्याक 2%
खेलहरूमा प्रयोग गरिएका यी पारंपरिक प्रतिशतहरू विकसित भएको थियो कि यो खेलाडीले आफ्नो इनामलाई छिटो पार्ने भन्दा कम गर्न को लागी त्यसलाई नगदमा बदल्न व्यवस्थित गर्न सक्दछ। उदाहरणका लागि, धेरै स्लॉटले कैसीनोमा जीतमा 4-5% ल्याउन सक्छ। यसैले, यस प्रतिशत मा एक 30xplaythrough आवश्यकता बेटिंग को प्रक्रिया मा इनाम को 120% को संभावित हानि मा परिणाम। खेलाडीले wagering समयमा पैसा लिन सक्दछ प्रतिशत मात्र दुई को विशेषता हो खेल, फ्रेन्च रुले र सबै एसिन्स भिडियो पोकर। पछिल्लो खेल व्यावहारिक रूपमा विचार गर्न सकिँदैन, किनकि तपाइँ स्वत: प्ले बिना उच्च शर्तहरू प्ले गर्न आवश्यक छ। तर यदि हामीले फ्रान्सेली रूले हेर्छौं, हामी हेर्न सक्छौं कि यसको साथ जित्न सम्भव छ। यस कारणको लागि, केहि खेल क्यासिनोले पारंपरिक खेल प्रतिशत परिवर्तन गर्न निर्णय गरे। तल, तपाईं कैसीनो पुरस्कार समूह द्वारा प्रयोग प्रतिशत को एक उदाहरण पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रांसीसी रूले र सबै अनुहारहरूको लागि अन्य खेलहरूसँग प्रतिशत तुलना गर्नुहोस् र तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि कति कम छन्।
स्लट्स र पार्लर गेमहरू 100%
टेबल पोकर, कैसीनो युद्ध र Sic Bo 50%
भिडियो पोकर, सबै ब्ल्याकजैक क्लासिक ब्ल्याकजैक, क्रेप्स र बीकार्का बाहेक 10%
क्लासिक ब्ल्याक ज्याक र सबै रूले 2%
सबै इस भिडियो पोकर 0%
तल तालिकामा, तपाइँ समूह द्वारा वर्गीकृत विभिन्न खेल प्रतिशतहरूको सारांश फेला पार्नुहुनेछ। ग्लोबर्ट, जैकपोट फैक्टरी, रोक्सी / स्प्लिन्डोडो, महल ग्रुप र इन्टरटपमा परम्परागत खेल प्रतिशतहरू छन्। अन्य क्यासिनोको लागि, ती प्रतिशतहरू प्रस्ताव प्रस्तावित कम हो। अन्तिम स्तम्भले देखाउँछ कि कुनै निश्चित क्यासिनोले खेलाडी बिना चाँडो नगद-आउट अनुमति दिन्छ साइन अप इनाममा wagering आवश्यकता पूरा गर्दछ। ध्यान दिनुहोस् कि साइन-अप इनाममा प्रारम्भिक निकायलाई केही समूहले खेलाडीले पुनः लोड इनामहरू नगद नगद अनुमति दिन्छ।
स्लट तालिका BJ
र भीपी फ्रान्सेली
बेले रक 100% 0% 10% 0% होइन
बेथवे 100% 50% 2% / 10% 10% हो
CanBet 100% 0% 10% 0% हो?
कैसीनो एक्शन 100% 50% 10% 2% होइन
कैसीनो पुरस्कार 100% 50% 10% 2% होइन *
फॉर्च्यून लाउन्ज 100% 50% 10% 40% होइन
Globet 100% 50% 10% 50% होइन
सुनको तारा 100% 25% 2% / 5% 25% होइन
ग्रैंड पभ 100% 10% 2% 10% होइन
इन्टरटप 100% 50% 10% 50% होइन
जैकपोट फैक्टरी 100% 50% 10% 50% हो
MiniVegas 100% 50% 10% 10% होइन
महल समूह 100% 50% 10% 50% होइन
PlayShare 100% 25% 5% 25% होइन
Roxy / Splendido 100% 50% 10% 50% हो
ट्रिजन 100% 0% 10% 0% होइन
भेगास पार्टनर 100% 25% 2% / 5% 25% होइन
Villento 100% 10% 10% 2% होइन
* 1 /2wagering (15xBonus) पछि फिर्ता लिने अनुमति
के शुरुवात हटाउन अनुमति छ भने के गर्न
यदि कैसीनो तपाइँ प्ले गर्दै हुनुहुन्छ भने खेलाडीहरूलाई छिटो हटाउन अनुमति दिनुहुन्छ (यानी प्लेथ्र आवश्यकता पूरा गर्न अघि), हामी तपाईंलाई ठूलो विजयसम्म पर्खनुहोस् र यो हुन्छ पछि तपाईंको विन्निहरू हटाउन जारी राख्नुहोस्। यदि तपाईं फरक रकम बेल्ट गरेर खेल्नु हुन्छ भने, यसले तपाईंलाई कैसीनोको लाभको लागि धेरै पैसा फिर्ता गर्नु अघि वा ठूलो विजय प्राप्त गर्न वा चाँडो आफ्नो बोनस गुमाउने अनुमति दिन्छ। तपाइँ एक स्लॉटलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ जसले उच्च-भिन्नता बिल्टको लागि अनुमति दिन्छ र ठूलो इनामहरू प्रदान गर्न सक्छ (जस्तै बिहीबार)। अर्को तरिका ब्लैकज्याक वा अन्य न्यून-भिन्न खेलहरूमा उच्च दाँत लगाउँदै छ। जबसम्म तपाईं लाभको लक्षित रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ वा गुमाउनु हुन्छ। तपाईं यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँले प्रयोग गर्नुहुने तरिका खेल्न जारी राख्नु हो: बोनसले तपाईंलाई रोक्न सक्दैन, किनकि तपाइँ आफ्नो winnings फिर्ता गर्नु अघि wagering आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक छैन।
यदि इनाम खाताको बाहिर लगत्तै इनामको पहिलो दस क्रेडिटहरु नगद रूपान्तरण गरीएको छ भने, तब औसत मा जीत / हानि अनुपात इनाम * हानि को संभावना - औसत शर्त * घर किनारा बराबर हुनेछ। तथ्यलाई ध्यान दिनुहोस् कि हारेको सम्भावना बढ्छ, औसत जित्ने प्रतिशत पनि बढ्दछ। यहाँ, घाटा को संभावना को जोखिम दर्शाउँछ खेल। र उच्च जोखिम, तपाईंले इनाम प्राप्त गर्नुहुने ठूलो।
तपाइँलाई एक उदाहरण दिन, कल्पना गर्नुहोस् तपाइँसँग १००% सम्मको १००% मिलान पुरस्कार छ। तपाईं रूलेटमा स in्ख्यामा आफ्नो ब्यालेन्सको २०० डलरको बारेमा विचार गर्न सक्नुहुनेछ, ठीक पछि फिर्ता फिर्तासहित, तपाईं जित्नुभयो भने। यसलाई साधारण शब्दहरूमा राख्न मानौं कि रौलेटमा त्यहाँ ० वा ०० छैन। तसर्थ, यहाँ तपाईले शर्त जित्ने मौका १ देखि is 100 मा रहेको छ जबकि तपाईले हराउने मौका to 100 देखि is 200 छ। यदि तपाईले जित्नु भयो भने तपाईको शेष रकम $ ,,२०० मा बढ्नेछ र तपाईले ,0 ,00,००० कमाउनुहुनेछ, जुन तपाईको जीत हो। माइनस बोनस जे होस्, यदि तपाईंले हराउनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो जम्माको १०० डलर जोगाउनुहुनेछ। सूत्र अनुसार, औसत जित्ने मात्रा $ $००० * (१/1) - $ १०० * (/ 36/35)) = $ .36 .7,200.२२। यदि तपाईं यसलाई हराउन को कम मौका को प्रयोग गरी विभिन्न संख्या को लागी गणना गर्नुभयो भने, सूत्रले देखाउँदछ कि औसतमा जित्नेहरू हारने सम्भावनाको पतनसँगै कम बढ्दछ। कृपया याद गर्नुहोस् कि यो केवल एक उदाहरण हो र हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्दैनौं। उल्लिखित रणनीति। यो सम्भव छ कि यस खेलमा केवल एक नम्बरमा तपाइँको ब्यालेन्सको सम्पूर्ण रकम शर्त ठाउँको सीमाहरूको कारणले अनुमति दिईने छैन।
के शुरुवात हटाउन अनुमति छैन भने के गर्न
यदि प्रारम्भिक निकायको कुनै सम्भावना छैन भने, पुरस्कारले तपाईंको अपील गुमाउँछ। यस स्थितिमा, इनाम एक साधारण बोनस हो, अन्य क्यासिनोस'सेवावरहरू द्वारा प्रदान गरिएको जस्तै। केवल एक प्रमुख विशेषता हो जसले यसलाई फरक बनाउँछ जुन सामान्यतया नगद योग्य असाधारण खेल प्रतिशत हो।
तपाइँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ उच्च विचरण वेजर्सबाट सुरु हुन्छ, हामीले अघिल्लो सेक्सनमा लेखेको जस्तै। त्यस पछि, तपाईं निम्न-भिन्नता wagers को साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जब सम्म तपाईं आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुन्न, ताकि तपाईंले wagering आवश्यकता पूरा गर्दा बस्टको संभावना कम गर्नुभयो। प्रत्येक खेलको प्रतिशतले इष्टतम खेल पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। तल तपाईं विभिन्न खेलहरूको गुच्छाको लागि सम्भावित इनाम प्रतिधारणको साथ एउटा टेबल फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं स्लटहरू खेल्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने हामी सुझाव दिन्छौं कि कम भिन्नताहरू।
पारंपरिक खेल प्रतिशत संग Wagering को समयमा इनाम प्रतिधारण
खेल वजन Wager बोनस
सबै इस भिडियो पोकर 10% 300xB + 0.75xB धेरै माथि
फ्रेन्च रूले 50% 60xB + 0.19xB मेड
वेगास स्ट्रिप ब्ल्याकजैक 10% 300xB + 0.05xB उच्च
जैक वा राम्रो भिडियो पोकर 10% 300xB -0.4xB उच्च
स्लट 100% 30xB -0.1xB देखि -0.8xB उच्च
हामीले पहिले नै भन्यौ कि धेरै कैसीनोहरूमा तपाई फ्रान्सेली रूले को प्रतिशत भेट्टाउन सक्नुहुनेछ 50% को संख्यामा राम्रो संख्यामा कमी आएको छ, जो कि बिटिङको समयमा सम्भावित विजेताले वर्णन गरेको छ। क्यासिनो इनामहरू प्रतिशतहरू इनाम अवधारणको मात्रासँग सम्बन्धित छन् जुन तपाईंले तल पाउन सक्नुहुनेछ। यो स्पष्ट छ कि यी परिस्थितिहरू अन्तर्गत सबै एसेन्स वा फ्रान्सेली रूले प्ले गर्न अप्ठ्यारो छ। ब्ल्याकैकको बारेमा पनि सम्भवतया हुन सक्छ, किनकि यसले स्वत: प्ले बिना उच्च शर्तहरू समावेश गर्दछ (यो कैसीनो इनाम समूह द्वारा लगाईएको प्रतिबन्ध)। यसैले, तपाईं3कार्ड पोकर वा क्यासिनो युद्ध र कम-फरक भिन्नतालाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
कैसीनो रिवार्ड्स संग Wagering को समयमा पुरस्कार इनाम
स्लट 100% 30xB -0.1xB सम्म
फ्रेन्च रूले 2% 1500xB -19.25xB धेरै माथि
सबै इस भिडियो पोकर 0% NA NA NA
औसत खेल माथिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी जीत / घाटा अनुपात गणना गर्न, तपाईं निम्न सूत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: पुरस्कार - औसत शर्त * घर किनारा (एक शर्तको लागि)। यदि तपाइँ तपाइँको खेलको सुरूमा उच्च-भिन्नता ब्याजर्स बनाउनुहुन्छ भने, तपाइँ औसतमा ब्याजरिring घटाउन सक्नुहुन्छ, जब तपाइँ हराउनुहुन्छ भने तपाइँले ब्याजिंग पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको हुँदैन। यस अवस्थामा, तपाइँ औसत मा बढेको जीत को मजा लिन सक्नुहुन्छ। के तपाईंले याद गर्नु भएको रूलेट परिकल्पना हामीले अन्तिम अध्यायमा प्रस्तुत गरेका थियौं? हामीले भन्यौं कि $००० डलर जित्ने सम्भावना १ देखि was 7000 थियो, जब कि एक for १०० को एकले 1 36 देखि 100ounted सम्म जम्मा गर्यो। मानौं कि हामीले युद्धमा 35०.xxB सम्भावित इनाम प्रतिधारणको साथमा दांव खेल्ने छनौट गर्यौं, यसको मतलब यो हो कि जित्ने औसत (प्रति शर्त) तल $ 36 ($ 0.3 - $ 6970 * 7000) मा जान्छ। गणनाको साथ अगाडि बढौं - जित्ने औसत औसत $ .100 .0.3..96.39 (($ 6970 1०० * (१/36) - $ १०० (100 35/36))) हुन्छ। यो नबिर्सनुहोस् कि हामी सोचविचार गर्दै छौं काल्पनिक अवस्थाहरू। वास्तविक क्यासिनोहरूमा, रूलेटमा केवल एउटा नम्बरमा तपाईंको ब्यालेन्सबाट सबै पैसा फिर्ता लिनु सम्भव छैन किनकि ठाउँको सीमाको कारण, र यो सम्भव भए पनि, यो सिफारिस गरिने छैन।
एकै समयमा, तपाईं कुनै पनि परिवर्तन बिना, सामान्यतया खेल खेल्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई क्यासिनोमा खेलिरहेको कुनैपनि समयमा 30 पटक बोनसको शर्त बन्ने योजना छ भने, बोनस केवल मद्दतको हुनेछ। यदि तपाईं ठूलो मात्रा मा पैसा वा उच्च-भिन्नता प्ले गर्न निर्णय गर्नुहुन्छ भने यो पनि अधिक उपयोगी हुनेछ खेल.
२०२० slotocash कुनै जमा छैन
भविष्यमा क्यासिनो गेमिङ मोबाइलमा छ?
क्यासिनो फ्लोर सुरक्षित राख्नुहोस् - जुवा जादूगर
शाजम! धर्म र हाम्रो जडहरू खोज्दै
केही ठूला ट्र्याकहरू सुन्नु गर्दा तपाईं अनलाइन ब्ल्याकैक प्ले गर्दा
लुगा किंवदंतियों: शीर्ष मा तपाईंको राती!
एनएफएल एक्शन मा ट्विकेनहम
Clearplay कैसीनो पुरस्कार सिस्टम अपडेट गरिएको: नोभेम्बर 29, 2019 लेखक: Damon
1.0.1 २०२० slotocash कुनै जमा छैन
1.0.2 भविष्यमा क्यासिनो गेमिङ मोबाइलमा छ?
1.0.3 क्यासिनो फ्लोर सुरक्षित राख्नुहोस् - जुवा जादूगर
1.0.4 बैटम्यानले के कुरा सुन्नेछ?
1.0.5 शाजम! धर्म र हाम्रो जडहरू खोज्दै
1.0.6 केही ठूला ट्र्याकहरू सुन्नु गर्दा तपाईं अनलाइन ब्ल्याकैक प्ले गर्दा
1.0.7 लुगा किंवदंतियों: शीर्ष मा तपाईंको राती!
1.0.8 एनएफएल एक्शन मा ट्विकेनहम
1.0.9 सफल खेलाडीहरूको लागि शीर्ष तीन स्लॉट युक्तिहरू
1.0.10 कसरी Bingo तपाईं स्वस्थ हुन मदत गर्न सक्नुहुन्छ